Covid bvunzo dzinodiwa nenyika: nyika dzese uye zvinodiwa | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | Matipi, General
Ziva iyo Covid kuyedza inodiwa nenyika rave ruzivo rwakakosha mushure megore redenda. Iwe unofarira kugara uchifambidzana navo, kunyanya kana uchifanira famba kazhinji zvebhizimusi kana zvekushanyira hama.
Nekuti nyika yega yega ine mwero wakasiyana wekubatwa nechirwere kubvira majekiseni anononoka, hapana yakajairika pateni inogona kusimbiswa pane zvinodikanwa zvekufamba. Izvo hazvina kana kumboita kuisa izvi mukuita mukati me European Union, iyo nyika dzayo dzinosiyanawo mukuda kana kusaita bvunzo kushanyira matunhu avo. Kune zvese izvi, isu tichaenda kunzvera kwauri iwe zvinodiwa zveCovid bvunzo nenyika.
1 Covid bvunzo dzinodiwa nenyika: kubva pane zvakakosha kusvika kukurudzirwa
1.1 Covid kuyedza muEuropean Union
1.1.5 INetherlands, pakati peyakaomesesa maererano neCovid bvunzo inodiwa nenyika
1.2 Covid bvunzo dzinodiwa nenyika dziri kunze kweEuropean Union
1.2.3 Switzerland, imwe yeinonyanya kudzvanywa maererano neCovid bvunzo dzinodiwa nenyika
Covid bvunzo dzinodiwa nenyika: kubva pane zvakakosha kusvika kukurudzirwa
Tichatanga kuongorora kwedu neEuropean Union pachayo, nekuti nyika dzinoisanganisira dziri pakati pevanonyanya kushanyirwa. Ipapo, isu tichaongorora mamiriro ezvinhu mune mamwe mativi epasi, kunyanya munyika dzinogashira huwandu hwakanyanya hwevashanyi.
Covid kuyedza muEuropean Union
Nyika dzeEuropean Union dzine zvimwe zvinodzvinyirira zvinodiwa pakugamuchira vashanyi. Kuwedzera kwakasimba kwedenda munzvimbo dzawo kuno kurayira nenzira iyi. Muchokwadi, kuwedzera kune inoenderana bvunzo kana PCR bvunzo, ivo vanowanzo bvunza mamwe magwaro. Munguva pfupi iri kutevera, iri kutariswa kuita a Covid pasipoti. Ngatione mitemo nenyika.
Chimbofunga izvi España nzvimbo ine njodzi huru. Naizvozvo, kuyerwa kwayo kuri yeakanyanya. Kana iwe uchifamba uchibva munyika yedu, uchafanirwa kuendesa yakaipa PCR inoitwa maawa makumi mana usati wasvika. Uye zvakare, uchafanirwa kunyoresa mu rekodhi yedhijitari uye, kamwe chete munyika, chengeta a Kugara kwemazuva gumi ayo anoderedzwa kusvika mashanu kana iwe ukapa isina kunaka Covid bvunzo.
Iyo haibvumidze kubhururuka kubva kuSpain panguva ino. Kana iwe uchizviita kubva kune imwe nyika, uchafanirwa kuratidza yakaipa PCR yakaitwa kusvika maawa makumi manomwe nemaviri usati wasvika. Saizvozvo, iwe unofanirwa kugadzira afidhavhiti yemagetsi kuti hautambure nechirwere uye zadza a Passenger Nzvimbo. Pakupedzisira, ivo vachada a Kugara kwemazuva gumi.
Thermal cycler kana PCR muchina
Vavakidzani vedu vanotibvumidza kupinda munyika yavo, asi iwe zvakare uchafanirwa kuratidza yakaipa PCR ine yakanyanya makore e72 maawa uye vhara mhiko yakapika kuti hauna Covid. Saizvozvo, kana iwe ukaratidza zviratidzo munzira kana pakusvika, uchafanirwa kuzvisunga-wega.
Yakanga iri imwe yenyika dzakatanga kutambura denda rechirwere uye zvakare inobvumidza kupinda kwevaSpanish. Asi, kana iwe uchida kushanyira zvishamiso senge Roma o FlorenciaIwe unofanirwa zvakare kuratidza yakaipa PCR yakaitwa kumaawa makumi mana nemasere usati wafamba uye uchafanirwa kuzadza chivimbiso usati watanga rwendo. Zvakare, kana iwe uine zviratidzo, uchafanirwa kuzviparadzanisa.
INetherlands, pakati peyakaomesesa maererano neCovid bvunzo inodiwa nenyika
Sezvatinokuudza, pakati pendudzi dzinobvumidza kufamba kubva kuSpain, ichi ndicho chimwe chezvakanyanya kuita maererano nezvinodiwa. Nekuti ivo vanokubvunza iwe wePCR bvunzo kusvika maawa makumi manomwe nemaviri ekuberekwa, pamwe nekuzadza a fomu rekuongorora zvekurapa zvese munzira yekubuda uye munzira yekudzoka uye zvimwe zvinodiwa.
Nekudaro, kana zvisinei nezvose izvi uine chero zviratidzo, zvinokutadzisa kupinda munyika. Uye, kana zvichikonzera kana iwe wasvika, uchafanirwa kusevha Kugara kwemazuva gumi.
Iwe unogona zvakare kuenda kumuvakidzani wedu wekumadokero kana uchida, asi nezvirambidzo zvakasiyana. Iwe unofanirwa kuendesa yakaipa PCR uye kuitwe mumaawa makumi manomwe nemaviri usati wapinda munyika.
Iwe zvakare unofanirwa kuvhara a kadhi renzvimbo yevatakurwi Uye, kana Spain iri pamatanho emakesi anodarika mazana mashanu pavanhu zviuru zana (izvo zvisiri izvo pari zvino), unofanira kuchengetedza Kugara kwemazuva gumi. Kune rimwe divi, kana iwe ukaenda ku Madeira o Azores, ivo zvakare vachakukumbira iwe kuzadza iyo Epidemiological mibvunzo.
Munhu anogamuchira mushonga weCovid
Covid bvunzo dzinodiwa nenyika dziri kunze kweEuropean Union
Isu tinowana yakakura zvakasiyana siyana yezvinodiwa mumarudzi asiri enzvimbo yakajairika yeEuropean. Mune dzimwe nyika humbowo haudiwe, asi isu tichavaisa padivi. Ngatione kuti ndeapi anoda imwe mhando yezvinodiwa.
Isu tinotanga nehurumende iyo ichangobva kuEuropean Union uye iine imwe yematanho epamusoro ekudzivirira nyika. Unogona kuishanyira kana uchida, asi uchafanirwa kuzadza a mufambi nzvimbo fomu pakusvika kwako. Uye zvakare, zvinoenderana neyepidemiological nguva mairi, ungangoda kugadzira a Kugara kwemazuva gumi.
Zvakare munyika ino, kubaiwa nhomba kwakafambira mberi zvakanyanya. Zvisinei, haibvumiri kupinda kwevafambi vanobva kuSpain. Kune rimwe divi, kana iwe ukasvika uchibva kune imwe nzvimbo, iwe unozokwanisa kupinda munyika, asi uchafanirwa kupa yakaipa PCR yakaitwa maawa makumi maviri nemaviri usati wasvika iwe kana pazuva padhuze naro.
Switzerland, imwe yeinonyanya kudzvanywa maererano neCovid bvunzo dzinodiwa nenyika
Nyika yeSwitzerland iri mumoyo weKare Continent uye, kunyangwe isiri yeEuropean Union, iri chikamu cheSchengen Area. Chibvumirano ichi chakabvisa miganhu yayo yekunze, zvisinei, pari zvino, Switzerland inodzvinyirira zvakanyanya maererano nekutambira kwevafambi.
Unogona kuenda kwairi, asi iwe unofanirwa kuendesa yakaipa PCR yakaitwa maawa makumi manomwe nemaviri usati wasvika. Paunenge uripo, uchafanirwa kugadzira Kugara kwemazuva gumi Izvo zvinogona kudzikiswa kusvika pa7 kana iwe ukawana imwe PCR. Zvakare, iwe unofanirwa kupedzisa iyo kiredhiti yekutsvaga kadhi.
Nyika yakabva denda iri zvakare yave kudzvinyirira zvakanyanya maererano nekubvuma vashanyi. Kana iwe uchida kuenda kuChina, iwe uchafanirwa kuendesa PCR uye a IGM (immunoglobulin detection) isina kunaka yakagadzirwa maawa makumi mana usati wasvika. Uye zvakare, ivo vanofanirwa kunge vakaitwa neirabhoritari iri mu chena inopihwa nemuzinda wenyika.
Iyi chete, iye anofanira kukupa iwe Kadhi uye paunosvika kuChina, uchafanirwa dzokorora PCR uye zadza fomu yehutano. Kana yekutanga iri yakanaka, iwe unosungirwa kupasa a Kugara kwemazuva gumi.
Nyika yeNorth America inorambidza kupinda munharaunda yayo kune vafambi vakapfuura mazuva gumi nemana usati wasvika kuSpain. Kana iwe uchifamba kubva kune imwe nyika, uchafanirwa kuvhara a fomu yemashoko uye zvakare a chirevo chehutano vasati vaenda. Pamusoro pe, nyika imwe neimwe ine zvainorambidza.
Muvakidzani wedu kumaodzanyemba yakamisa ndege kubva kuSpain. Kana iwe ukasvika uchibva kune imwe nyika, uchafanirwa kuendesa yakaipa PCR inoumbwa kusvika maawa makumi maviri nemaviri pamberi porwendo. Uye zvakare, inofanirwa kunyorwa muchiFrench, Chirungu kana chiArabic. Chekupedzisira, iwe paunosvika, ivo vachakumbira yako kadhi yehutano hwevatakurwi.
Kunyangwe iri mune edu antipode, iwe ungangoda kana kuda kuenda kuAustralia. Pakadaro, isu tichakuudza izvozvo haina mvumo kubva kuSpain. Kana iwe ukasiya kubva kune imwe nyika, ivo vanozokumbira imwe chirevo chekufamba uye iwe unogona kumanikidzwa kupasa a Kugara kwemazuva gumi.
Kunyangwe iri imwe yenyika dzakanyanya kubatwa nedenda, Brazil inokutendera kuti ufambe kubva kuSpain. Nekudaro, iwe unofanirwa kuendesa yakaipa PCR inoitwa kusvika maawa makumi manomwe nemaviri rwendo rwako usati wazadza fomu yehutano.
Kana isu tikataura nezveyakakodzera miedzo yeCovid nenyika, Mexico ndiyo imwe yezvinonyanya kudikanwa. Kuti uende ikoko, iwe unongofanirwa kuvhara iko kufona Risk factor yekuzivisa mibvunzo muvafambi pakusvika kwako.
Nyika yeCaribbean, yakagara yakabatana neSpain, inokutendera iwe kuti upinde kana uchibva kunyika yedu. Nekudaro, iri kutoda zvakanyanya maererano nezvinodiwa. Iwe uchafanirwa kuendesa PCR yaitwa maawa makumi maviri nemaviri usati waenda.
Paunosvika, unofanira kuzadza a kuzivisa hutano uye zvinokwanisika kuti vachakuita imwe PCR. Uye zvakare, iwe une basa rekubhadhara a chiyero 30 US dollars uye, kana iyo yekupedzisira PCR yakataurwa iri yakanaka, iwe unomanikidzwa kutevedzera kuiswa kwemurwere kwake ega.
Nyika ino yarohwawo zvakaipisisa nedenda iri. Muchokwadi, kwenguva iyo kufamba kubva kuSpain kwakarambidzwa. Kana uchizviita kubva kune imwe nyika, uchafanirwa kupa yakaipa PCR ine anosvika maawa makumi manomwe nemaviri uye kusaina a afidhaiti yehutano. Chekupedzisira, iwe unofanirwa kupa humbowo hwekuti une inishuwarenzi iyo inovhara iyo inogona kuve yehutano mari inokonzerwa neCovid kana iwe ukava nechirwere.
Covid-19 yekuongorora nzvimbo muNew Zealand
Yakanga iri imwe yenyika dzekutanga, mushure meChina, kukanganiswa nedenda iri. Zvichida ndosaka zvichinyanya kuomarara kana uchigamuchira vafambi vanobva kune dzimwe nyika. Kana vari avo vanobva kuSpain, havatenderi kupinda kana vapedza mazuva gumi nemana apfuura munyika medu.
Ndege dzinobva kuSpain dzambomiswa, zvirinani, kusvika April 30. Kana iwe uchifamba uchibva kune imwe nyika, uchafanirwa kuratidza yakaipa PCR muChirungu uye waita kusvika maawa makumi manomwe nemaviri usati wasvika. Zvakare, iwe unogona kumanikidzwa kusevha Kugara kwemazuva gumi.
Zvakare nyika yeAndes ine ndege kubva kuSpain dzinorambidzwa, zvirinani kusvika pakati paApril. Kana iwe ukasvika uchibva kune imwe nzvimbo, uchafanirwa kuendesa yakaipa PCR yaitwa maawa makumi maviri nemaviri pamberi porwendo. Iwe zvakare unozofanirwa kuisa a mushumo wakashata uye vhara a afidhaiti yehutano zvakare mukati mawo maawa makumi manomwe nemaviri usati watiza Iyi link.
Mukupedzisa, takuitira ongororo ye Covid bvunzo dzinodiwa nenyika. Sezvauri kuona, kana iwe uchida kutora rwendo, iwe uchave uri pasi pezvirambidzo zvakawanda. Uye izvi hazvisi kuzovandudza kusvikira nhomba iri yakakura. Asi zvirinani kuti urambe uchifamba, izvo hazvisi chinhu chidiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Covid bvunzo dzinodiwa nenyika